HORDHAC: Real Betis v Real Madrid – Gool FM
CR Shariif January 13, 2019
( La Liga ) 13 Jan 2019. Real Madrid ayaa booqaneysa dhigeeda Real Betis kulamada 19-aad ee La Liga asbuucan.
Los Blancos ayaa dhibane ah kaddib markii aysan wax guula gaarin labadii dheel ee lasoo dhaafay waxayna ku jiraa kaalinta 5-aad iyagoo 10-dhicood ka dambeya hogaamiyaasha horyaalka ee Barcelona.
Waqtiga: 10:45 pm ( SGA )
Garsooraha: Alejandro José Hernández
Garoonka: Estadio Benito Villa
Quique Setien ayaa la filayaa inuu kusoo laabto qadka dhexe kulan Real Madrid.
Junior Firpo ayaa weli diyaar u aheyn inuu kusoo bilaawdo shaxda kowaad madaama uu dhaawacan yahay, sidaa owgeed Cristian Tello ayaa sii wadan doona booskaa.
Antonio Sanabria ayaa laga yabaa inuu hogaamiyo hogaamiyo kooxda guriga kaddib markii uu gool dhaliyay kulamadii lasoo dhaafay.
Thibaut Courtois ayaa kabasho ku maqan inta ka harsan bishaan sababo la xariira dhaawac, taa ayaa la micno ah in Keylor Navas uu kusoo laaban doono goolka.
Toni Kroos ayaa sido kale dhaawac ah si lamida Dani Ceballos ayay suuragal tahay inuu booska qadka dhexe ka badalo.
Lucas Vazquez waa ganaax halka uu dhaawac yahay Gareth Bale, Isco ayaana laga yabaa inuu helo bilaawga shaxda Santiago Solari.
Saxiixa January Brahim Diaz ayaa kulankiisii ugu horreeyay u saftay Madrid bartamaha todobaadkii hore Copa del Rey iaydoo markale la rajeynayo inuu safka kooxda kamida noqdo dheeshan.
Betis ayaa guulo muhiima ka gaartay Real Madrid tobankii sano ee lasoo dhaafay, waana seddax guula iyo bar-baro ay kala kulmeen 16-kii dheel ee u dambeysay oo ay wajahaan kooxda horyaalka yurub ah.
Real Betis ayaa laba dhibcood ka dambeysa kooxda Santiago Solari dhanka kala sareynta horyaalka, guul ay ka garaan dheesha caawa ayaa ka dhignaan doona in Madrid ay u dhici doonto booska lixaad ee horyaalka.
Kulankii xagaagii lasoo dhaafay dhexmaray kooxahan waxaa la iska dhaliyay siddeed gool, waxayna Madrid ku badisay kulankaa 5-3 xillii afar gool ay dhaliyeen qeybta dambe cayaarta.
Solari ayaa badiyay 12-kulan oo kamida 16-dheel uu maamulay Real tan iyo markii uu si kumeel gaara ula wareegay shaqada kooxda, laakiin waxaa sii kordhaya inaan lala xariirinaa laacibkii hore ee qadka dhexe mid sii ahaan doona macalinka kooxda kaddib natiijooyin liita uu la yimid cayaarihii dambe.
HORDHAC: Barcelona v Eibar